Mhete switch inoratidzira kuti kuchave ne iPhone 7 Space Nhema | IPhone nhau
Iyi mbeveve switch inoratidza kuti kuchave neiyo iPhone 7 Space Nhema
Takatanga svondo nyowani uye, sezviri pachena, isu takatanga kutenderera kutsva kweguhwa uye / kana kudonha. Imwe yeguhwa rakange richitenderera nezve iyo iPhone 7 ndeyekuti pachave nemuenzaniso wakasviba zvakanyanya kupfuura iyo grey nzvimbo yave ichiwanikwa kubvira iyo iPhone 5s, iyo kusvika zvino yave kuzivikanwa seBlack, Space Nhema kana Space White. Iye zvino, pikicha yakaburitswa neOnLeaks inoita kuti tifunge kuti iyi modhi ichave yechokwadi kana iyo iPhone 7 uye iPhone 7 Plus zvaratidzwa munaGunyana.
Semazuva ese, chinhu chekutanga kuonekera kwechigadzirwa chitsva hachisi ichocho, asi chinhu chidiki senge tray yeSIM kadhi, mhete yekamera (isipo muiyo iPhone 7) kana, senge mune ino kesi, iyo mbeveve switch yeiyo inotevera iPhone. Mufananidzo unotevera wakatumirwa paWeibo, asi OnLeaks, uyo anovimbisa kuti iyo nyowani nyowani ichave iri yechokwadi, yakanzwika pa Twitter.
IPhone 7 Space Nhema mbeveve switch, ichokwadi kana nhema?
Sezvauri kuona mumufananidzo wapfuura, ruvara rweiyi inofungidzirwa iPhone 7 mbeveve switch iri dema chose, zvakanyanya zvekuti inoyeuchidza nezvevara iro raivepo kusvika iyo iPhone 5. Isu tinorangarira kuti iyo iPhone 5 yakasvika nhema, asi iyo aluminium yaive yakarongedzwa neezel uye izvo zvinogona kunge zviri izvo chikonzero nei modhi munzvimbo grey .
Sezvakaita chero kudonha kana ruzivo runoonekwa pamberi penguva, isu tinofanirwa kuramba takakahadzika kusvika panguva iyo kuratidzwa kweiyo iPhone 7 uye iPhone 7 Plus kunova pamutemo asi, sekutaura kunoita, "kana rwizi ruchirira, mvura inotakura" . Zvakare, ngazvive zvakadaro OnLeaks ndiani akadzokorora uyu mufananidzo (kunyangwe gare gare yakaburitsa imwe kunyevera kuti ndezvekunyepa) chikonzero chakanaka chekufunga kuti inotevera apple apple ichadzoreredza iro vara vazhinji vanofarira zvakanyanya. Kana iyo Space Nhema yakafanana neiyo iri mumufananidzo wapfuura, iwe waizoitenga?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Iyi mbeveve switch inoratidza kuti kuchave neiyo iPhone 7 Space Nhema
Ngatitarisirei kuti pendi haidonhe
Ini ndichiri kusada dhizaini yekamera, zvinotyisa ...
Kana yakafanana neiya iri mumufananidzo, ndinowana maviri
Tinya kuti Dudziro, iyo nyowani tweak inotibvumidza kuti tishandure iwo mavara nekuasarudza
Pangu anosimbisa kuti hakuzove nekuputsika kwejeri kweiyo iPhone 4s, 5 uye 5c